ဒူဒူကြီး: Noise and vibration on maritime vessels (၁)
Noise and vibration on maritime vessels (၁)
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု environmental pollution အမျိုးအစားတွေကို၊ ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ (၁) လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution, (၂) ရေထုညစ်ညမ်းမှု water pollution, (၃) မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု soil pollution, (၄) အသံဆူညံမှု noise pollution, (၅) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓါတ် သက်ရောက်မှု radioactive pollution, (၆) အပူချိန်မြင့်မားလာမှု thermal pollution, (၇) အလင်းရောင်ပိုမိုလွန်ကဲမှု light pollution, (၈) အမြင်အာရုံ တားဆီးနှောက်ယှက်ခံရမှု visual pollution နဲ့ (၉) မိမိကြောင့် အခြားသူများမှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ပေါါစေမှု personal pollution ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။
သဘေ်ာတွေနဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံ တွင်းတူးစင်တွေမှ ဆူညံသံထုတ်လွင့်မှု noise radiation ဟာ၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ environmental impact ဖြစ်တဲ့အတွက် noise pollution အဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ကာလတွေမှာ၊ သဘေ်ာ on-board ships တွေနဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းတူးစင် offshore installations တွေမှ ပေါါပေါက်လေ့ရှိတဲ့ အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှု noise and vibration ကိစ္စကို၊ အလးအနက် ထားကာ လျှော့ချဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ ဆူညံသံ high noise levels ကြောင့်် human fatigue ဆိုတဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှာ ပင်ပန်း နွမ်းနွယ်မှုတွေနဲ့ miscommunication ဆိုတဲ့ လွဲမှားနားလည်မှုတွေ ဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပြီး၊ အမှားအယွင်း human error တွေမှ တဆင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် risk တွေနဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု losses တွေ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။
တုန်ခါမှု vibrations တွေကြောင့်လည်း သဘေ်ာတွေနဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းတူး စင်တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ structure တွေ၊ စက်ကရိယာ machinery တွေနဲ့ လူသားတွေအပေါါမှာ ဘေးအန္တရာယ် hazards တွေ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Fig. Approximate noise level
ဆူညံသံ သတ်မှတ်ချက် noise levels တွေပြဌာန်းထားရာမှာ၊ နိုင်ငံ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ မတူညီတဲ့အတွက်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်း အဖွဲ့အစည်း IMO ဟာ၊ သဘေ်ာတွေနဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံ တွင်းတူးစင်တွေအတွက် "ISO standard 6954 : Guidelines for permissible mechanical vibrations on board seagoing vessels" ဆိုပြီး၊ တသမတ်တည်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ရုံ workshop 70 dB, မီးဖိုဆောင် kitchen 60 dB, ထိန်းချုပ်ခန်း control rooms 55 dB, ရုံးခန်း offices 55 dB, ထမင်းစားးခန်း dining rooms 55 dB နဲ့ အိပ်စက်နားနေခန်း sleeping area 45 dB ဆိုပြီး၊ မြေပြင် land မှ noise limit level ကို ပြဌာန်းထားပေမယ့် IMO ကတော့ workshop 85 dB, မီးဖိုဆောင် kitchen 75 dB, ထိန်းချုပ်ခန်း control rooms 75 dB, ရုံးခန်း offices 65 dB, ထမင်းစားးခန်း dining rooms 65 dB နဲ့ အိပ်စက်နားနေခန်း sleeping area 60 dB ဆိုပြီး၊ သဘေ်ာတွေနဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံ တွင်းတူးစင်တွေရဲ့ noise limit level ကို ပြဌာန်းထားပါတယ်။
သဘေ်ာတွေကို တည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ ဈေးကွက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုအရ၊ structural optimization ဆိုတဲ့ တည်ဆောက်ပုံ သာလွန်ကောင်းမွန်မှုနဲ့ high speed ဆိုတဲ့ လျှင်မြန်စွာ သွားလာမောင်းနှင်နိုင်မှု ကိစ္စတွေအတွက်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ design ပိုင်းအရ၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲကာ တည်ဆောက်လာကြသလို၊ အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှုဟာလည်း လိုက်ပါ တိုးမြင့်လာတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှု လျှော့ချရန် အလေးထား၊ တည်ဆောက်တဲ့အခါ operational and design constraints ဆိုတဲ့ မောင်းနှင်သွားလာမှုနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတွေမှာ၊ အားနည်းချက်တွေ အနည်းနဲ့အများ ပေါါပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
သဘေ်ာပုံစံရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်း design practice ကိုဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ model testing ဆိုတဲ့ အချိုးကျနမူနာပုံစံငယ် တည်ဆောက်စမ်းသတ်ခြင်း၊ calculation ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းနဲ့ heuristic deduction ဆိုတဲ့ ယခင် အတွေ့အကြုံပေါါမူတည်ပြီး၊ အမှားကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အခြေခံရပါတယ်။
သဘေ်ာ မောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ လုံလောက်သော စွမ်းအင် ရရှိဖို့နဲ့ ပုံသဏ္ဍန်မှန်ကန်တဲ့ particular hull form ရရှိစေဖို့ အချိုးကျနမူနာ ပုံစံငယ် တည်ဆောက်စမ်းသတ်ခြင်း model testing ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
Fig. Different types of cavitation aroundapropeller
စကေးကိုက်အချိုးကျ properly scaled နမူနာအဖြစ်၊ တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်၊ propeller cavitation ကိုစမ်းသတ်နိုင်သလို၊ သဘေ်ာမောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ သဘေ်ာ ကိုယ်ထည်မှာ propeller ကြောင့် ပေါါပေါက်လာမယ့် hull surface pressures ကိုလည်း၊ ကြိုတင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် တည်ငြိမ်တဲ့ stabilizing cavitation နဲ့ လှုပ်ရှားတုန်ခါမှုလျှော့ချခြင်း minimizing excitation တို့ကို၊ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာ ပန်ကာရွက် propeller လည်ပတ်ရာမှ ပေါါပေါက်လာမယ့် တည်ငြိမ်တဲ့ stabilizing cavitation အနေအထားနဲ့ ကိုယ်ထည် hull မှာ ပေါါပေါက်လာမယ့် အနည်းဆုံး လှုပ်ရှားတုန်ခါမှု minimizing excitation အခြေအနေရှိမှသာ အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှုတို့ နည်းပါး ကျဆင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခါတရံမှာတော့ ကုန်ကျစားရိတ် ground coast ကိုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့၊ model testing ကို မဆောင်ရွက်တော့ပဲ omitted အဖြစ် ချန်လှပ်ထားတတ်ပါတယ်။
Fig. MAN propulsion package type 6L21/31-VBS,
(including main engine, reduction gearbox, shafting, controllable pitch propeller and propulsion management system)
သဘေ်ာတွေမှာ အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှု noise and vibration ပေါါပေါက်စေတဲ့ အဓိကအရင်းအမြစ် sources တွေကတော့၊ prime movers တွေဖြစ်တဲ့ diesel engines, steam turbines နဲ့ gas turbines တွေ၊ သဘေ်ာမောင်းနှင်တဲ့ အခါ ပေါါပေါက်လာမယ့် shaft-line dynamics ရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ air conditioning and ventilation systems တွေ၊ သဘေ်ာကိုနောက်သို့ ပြန်လည်ရွှေ့လျှားစေမယ့် traverse propulsion unit ကဲ့သို့ manoeuvring devices တွေ၊ deck equipments တွေဖြစ်တဲ့ cargo handling and mooring machinery တွေ၊ ရေယက်အားကောင်းစေရန် propeller မှာ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားတဲ့ vortex shedding mechanisms တွေနဲ့ သေးသွယ်တဲ့ ကိုယ်ထည် တည်ဆောက်ပုံ slamming phenomena တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
propeller cavitation ကိုလျော့ချရန်နဲ့ propeller boss end မှာ၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် မြင့်မားတဲ့ strong vortex flow ကို လျှော့ချရန်တို့ အတွက်၊ သဘေ်ာရဲ့ propeller မှာ vortex shedding mechanisms တွေ၊ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်လာကြပါတယ်။ သဘေ်ာမောင်းနှင်တဲ့အခါ propeller disc area မှ water flow ဟာ accelerated and twisted အနေအထားမျိုးဖြင့် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပါတယ်။
Fig. Propeller without PBCF
blade trailing edge တွေမှာ down flow အနေနဲ့ စီးဆင်းသွားတဲ့ flow ဟာ propeller boss တဝိုက်မှာတော့ အရှိန်မြင့်တက်လာပြီး၊ accelerate swirl flow အနေနဲ့ စီးဆင်းပါတယ်။ အရှိန်မြင့်လာတဲ့ swirl flow ကြောင့် boss end မှာ strong vortex flow ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ strong vortex shedding တနည်းအားဖြင့် hub vortex ကြောင့် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို၊ အပြည့်အဝမရရှိတော့ပဲ energy loss ဖြစ်ပေါါရပါတယ်။
Fig. Propeller with PBCF
vortex shedding ကိုလျှော့ချနိုင်ရန် vortex shedding mechanisms အဖြစ် propeller ရဲ့ surface နဲ့ blade trailing edge တွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြတဲ့အခါ hub vortex ကျဆင်းသွားပေမယ့်၊ noise and vibration တွေ မြင့်တက်လာတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု energy loss ကို၊ ပြန်လည်အစားထိုးရန် အတွက် တနည်းအားဖြင့် hub vortex ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်၊ PBCF လို့ခေါါတဲ့ propeller boss cap fins တွေကို၊ vortex shedding mechanisms အဖြစ် ထည့်သွင်း၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ propeller efficiency ကောင်းစေရန် တတ်ဆင်ထားတဲ့ PBCF ကြောင့်၊ noise and vibration တွေ ကျဆင်းသွားနိုင် ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ unwanted sound အသံတွေကို ဆူညံသံ noise လို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ noise တွေကို acoustic noise နဲ့ non-acoustic noise ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင် ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာ ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိတဲ့ noise ဟာ non-acoustic noise ဖြစ်ပြီး၊ မောင်းနှင်ရာမှပေါါပေါက်လာတဲ့ ဆူညံသံ audible noise တနည်းးအားဖြင့် တုန်ခါမှုမှ ပေါါပေါက်လာတဲ့ ဆူညံသံ vibrational noise တွေအဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင် ပါတယ်။
တုန်ခါမှု vibration ကတော့ မျှခြေအားလုံးတူညီနေတဲ့ equilibrium point ဆုံမှတ် တခုမှာ၊ လွဲချက်ညီစွာလှုပ်ရှားမှု oscillated movement ပေါါပေါက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ vibration တွေကို ယေဘုယျအားဖြင့် free vibration နဲ့ forced vibration ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာ ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိတဲ့ vibration ကတော့ forced vibration ဖြစ်ပြီး၊ mechanical system တခုအပေါါမှာ ဆန့်ကျင်ဖက်အား alternating force သို့မဟုတ် ရွှေ့လျားမှု motion တခုခု သက်ရောက်ရာမှ ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် forced vibration သက်ရောက်ရာမှ ရပ်တန့်သွားတဲ့အခါ damped vibration တွေလည်း ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်း အဖွဲ့အစည်း IMO မှ သဘေ်ာတွေမှာ maximum recommended acceleration ဆိုပြီး၊ တုန်ခါမှု vibration ပမာဏကို၊ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ overall values အနေနဲ့ (2 ~ 8000 Hz) အထိ ခွင့်ပြုထားပြီး၊ vertical နဲ့ horizontal acceleration အနေနဲ့ အိပ်ခန်း crew cabins၊ ထမင်းစားးခန်း mess၊ နားနေခန်း recreation rooms တို့ကို၊ 0.2 ~ 0.4 m/ sec2, စက်ကရိယာတွေ တတ်ဆင်ထားရှိတဲ့ general machinery spaces ကို 1.0 ~ 2.0 m/ sec2 နဲ့ ထိန်းချုပ်ခန်း control rooms ကို 0.3 ~ 0.6 m/ sec2 ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
mechanical system တခုအပေါါမှာ forced vibration တွေပေါါပေါက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို၊ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ unbalance, misalignment, bent shaft, loose foundations, gears in the machine နဲ့ bearings တို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ mechanical system တခု သို့မဟုတ် machinery installation system တွေမှာ "noise and vibration" တွေဟာ စည်းချက်ညီစွာ harmonic အနေနဲ့ တသမတ်တည်း မကြာခဏ ပေါါပေါက်လေ့ရှိပြီး၊ ထိန်းချုပ်ပြုပြင်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ရေယက်ပန်ကာ propeller တွေမှတဆင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ "noise and vibration" တွေကတော့ အချိန်နဲ့အမျှ ပမာဏသေးငယ်စွာ cyclic perturbations အနေနဲ့ ပြောင်းလဲပေါါပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။
သဘေ်ာမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ diesel engine တွေဟာ မောင်းနှင်လည်ပတ်တဲ့အခါ ဆူညံသံ audible noise တွေပေါါထွက်သလို၊ crankshaft ကြောင့်လည်း flex and vibrate ဆိုတဲ့ တုန်ခါမှု တနည်းအားဖြင့် 'torsional vibration' တွေပေါါပေါက်ပါတယ်။
torsional vibration ဆိုတာကတော့ shaft တချောင်းဟာ axis of rotation အနေနဲ့ လည်ပတ်ရာမှ ပေါါပေါက်လာတဲ့ angular vibration ဖြစ်ပါတယ်။ torsional vibration ဟာ vibrational energy ကို သိုလှောင်ထားတဲ့အတွက်၊ resonant frequency ဆိုတဲ့ တချက်တချက်မှာ ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ amplitude ဖြင့်မြင့်တက်သွားမယ့် oscillated movement ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Fig. Torsional vibration - forces on the crank shaft that cause vibrational harmonic
crankshaft, connecting rod နဲ့ piston အစရှိတဲ့ slider-crank mechanism ကြောင့် alternating torques တွေ ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ torsional vibration ဖြစ်ပေါါရပါတယ်။ combustion cycle အတွင်း တကြိမ်နဲ့ တကြိမ် cylinder pressure တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း၊ cylinder pressure တည်ငြိမ်မှု ရှိပေမယ့် slider-crank mechanism ဟာ smooth torque အနေနဲ့ output power ကို ထုတ်မပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ piston mass နဲ့ connecting rod mass တို့ ရွှေ့လျှားရာမှ တဆင့် "inertia" torques လို့ခေါါတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် alternating torques တွေပေါါပေါက်လာခြင်း တို့ဟာ slider-crank mechanism ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ alternating torques တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Oscillation with various degrees of damping
(Red - under damping, Green - critical damping and Blue - over damping)
တဖြောင့်တည်း straight line configuration အနေနဲ့ cylinder unit (၆) လုံး အထက်၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ အင်ဂျင်တွေရဲ့ crankshafts ဟာ၊ အလျှားရှည်တဲ့ အတွက် flexible crankshafts အနေနဲ့ ကွေးကောက်သွားနိုင်ပြီး၊ torsional vibration တွေပေါါပေါက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် main နဲ့ conrod' bearings တွေနဲ့ crank shaft ကြားမှ oil film တို့ကြောင့် shearing resistance ရှိနေပြီး၊ နဂိုမူလ သဘာဝ inherently အနေနဲ့ damping ရှိနေပါတယ်။
torsional vibration ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လျှင် crankshaft failure ဖြစ်ပေါါနိုင်သလို၊ crankshaft မှတဆင့် ဆက်သွယ်လည်ပတ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း accessories တွေလည်း၊ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ torsional vibration ကို လျှော့ချထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်၊ torsional damper ကို crankshaft ရဲ့ ထိပ်ဖက် front nose မှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ torsional damper တွေကို viscous type damper နဲ့ tuned absorber type damper ဆိုပြီး ခွဲခြားတွေ့ရပါတယ်။ tuned absorber type damper ကို 'harmonic balancer' လို့လည်း ခေါါပါတယ်။
viscous type damper မှာ inertia ring ပါဝင်ပြီး၊ viscous fluid ထည့်သွင်းထား ပါတယ်။ crankshaft forces ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ torsional vibration ဟာ narrow passages ဖြစ်တဲ့ inertia ring အတွင်းမှ viscous fluid သို့သက်ရောက်ပြီး၊ heat အဖြစ် dissipates အနေနဲ့ ပြန့်ကျဲသွားပါတယ်။ tuned absorber type damper သို့မဟုတ် harmonic balancers တွေမှာတော့ inertia ring အတွင်း spring element သို့မဟုတ် rubber element ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ spring element သို့မဟုတ် rubber element ကို crankshaft မှာပေါါပေါက်လာမယ့် first torsional natural frequency ဖြင့်ချိန်ညှိထားပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ specific engine speeds တခုမှာ crankshaft ရဲ့ first torsional natural frequency ပမာဏထက်ပိုပြီး၊ excitation torque ပေါါပေါက်လာတဲ့အခါ၊ vibration ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
Reference and image credit to : 1st International Ship Noise and Vibration Conference: London, June 20-21, 2005., Ship Vibration and Noise : Some topical aspects by J. S. Carlton and D. Vlasic., Nestorides, E.J., BICERA: A Handbook on Torsional Vibration, University Press., http://odourcontrol.wordpress.com/, http://www.mandieselturbo.com/, http://www.boatdesign.net/http://www.onedirt.com/, http://www.splung.com/, http://pbcf.motech.co.jp/
Posted by ကိုထွန်း at 04:19